नेपालले इराकसित मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै, अनलाइनमा कसरी हेर्ने ? - Sidha News
नेपालले इराकसित मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै, अनलाइनमा कसरी हेर्ने ?
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि हाल नेपाली टोलीका साथ इराकमै रहेका छन् । नेपाली टोली जेठ २९ गते नेपाल फर्किनेछ ।-रासस
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै छ । यो खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी १०ः१५ देखि सुरु हुनेछ ।
इराकी स्पाेर्ट्स च्यानल आईएमएनले युट्युवमा याे खेलकाे प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउनेछ । साथै दर्शकले गाेल नेपाल डटकममा पनि याे खेल हेर्न सक्नेछन् ।
विश्वकप छनोट चरणको खेलपूर्व नेपालले इराकसँग आज अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो । नेपाल र इराकको फुटबल खेल अनलाइनमा हेर्नुहोस।